WWE News: JBL dia nandefa bitsika ny dikantenin'ireo olon-dehibe tsy nahy - Wwe
WWE News: JBL dia nandefa bitsika ny dikantenin'ireo olon-dehibe tsy nahy
Vao haingana ny angano WWE John Bradshaw Layfield nisioka momba an'i Paul Ellering, naneho ny fanohanany ny Hall of Famer WWE ary mpitantana ny Author of Pain. Nandefa pikantsary ihany koa ny pikantsariny, izay manome topy maso mahaliana antsika amin'ny zavatra tena tsy PG.
Kely amin'ny fahalalan'i JBL dia nisy vakizoro hafa nosokafana tao amin'ny tranokala fitehirizany mitondra ny anarana hoe Katka Kyptova miboridana - Google Search. Nanamarika izany ny mpankafy iray tao amin'ny Twitter, izay nahagaga ny mpaneho hevitra an'ny SmackDown Live.
fampakaram-bady sable sy brock lesnar
Manàna fitiavana foana @PaulElleringWWE iray amin'ireo lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra! pic.twitter.com/AqSmF862DD
- John Layfield (@JCLayfield) 29 Janoary 2017
rey mistery vs fampisehoana lehibe
Ho an'ireo liana te hahafantatra anay, Katka Kyptova dia bodybuilder vehivavy miaraka amina hozatra tsy misy kilema; ary tena manana sary mazava azy amin'ny Internet izy. Mbola manontany tena ihany hoe ahoana ny bikany? Ity misy horonantsary Kyptova ao amin'ny Youtube izay mampiseho ny toe-batany:
Tranga toy izany koa no niseho tamin'ny taon-dasa rehefa nandefa sary ny hazo krismasiny i Scott Hall, miaraka amin'ny sary vetaveta vitsivitsy mandeha amin'ny fahitalavitra any aoriana.
Ny bitsika izay nahavita ny fihodinana tamin'ny sehatra media sosialy isan-karazany dia navoaka nandritra ny hetsika NXT Takeover, nialoha ny Royal Rumble. Ilay bitsika dia toa fampisehoana fanohanana an'i Paul Ellering nandritra ny fidiran'ny Mpanoratra ny fanaintainana.
Ny pikantsarin'ilay mpizaha dia napetraka tao amin'ny fampielezana ny Takeover an'ny WWE Network. Ny takelaka misokatra hafa dia ny tranonkala ofisialin'ny USA Sevens Rugby.
JBL dia namafa ilay bitsika vetivety ary nanolo azy io tamin'ny kinova voalohan'ny lahatsoratra voalohany. Na izany aza, mpankafy maro no mbola nahavita nisambotra ilay zava-nitranga iray manontolo, ary niseho indray ilay lahatsoratra tsy nampoizina manerana ireo sehatra media sosialy isan-karazany.
Tsy mbola nisy ny fanambarana ofisialy mikasika ny raharaha na avy amin'ny JBL na WWE.
Na dia fahadisoana marina natao tamin'ny lafiny JBL aza io tranga io dia tsy hidina tsara ny WWE noho ny fijoroany PG. Na eo aza ny fizarana mifototra amin'ny resadresaka nipoitra indray, WWE dia nanalavitra ny atiny miharihary tamin'ny firaisana hatramin'ny lasa PG tamin'ny 2008.
Teny nalaina 11 tadidio rehefa mahatsiaro very ianao amin'ny fiainanao
rehefa misy mandainga aminao foana
inona no hatao rehefa raiki-pitia amin'ny lehilahy manambady
rehefa misy lehilahy mibanjina vehivavy inona no dikan'izany
izay tokony hatao rehefa leo aho ao an-trano
lazao anay ny zava-misy tokana momba anao